संगीत Archives - www.dthreeonline.com
इटहरी/ नेपाली संगीत आकाशमा यतिबेला जताततै सुनिने आवाज र नाम हो रचना रिमाल । नेपाल आइडल प्रतिष्पर्धाबाट चुलिएको उनको चर्चा यतिबेला अत्याधिक छ । उनै लोकप्रिय गायिका रिमालले संगीतमा स्नातक अध्ययन सुरु गरेकी छन् । शुक्रवार आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमा एक स्ट्याटस र तस्वीर पोस्ट्याउदै उनले संगीतमा स्नातक अध्ययन सुरु गरेको जानकारी गराएकी छन् । उनका अनुसार रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा संगीत बिषयमा पहिलो वर्...
इटहरी/ राई इज किङ राजेश पायल राईको स्वरमा रहेको ‘खुसिका मुहान’ बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यस गीतमा राज मुकारुङको शब्द रहेको छ भने अम्बर तुम्बापो सुब्बाको संगीत रहेको छ । एआरको प्रस्तुतीमा बनेको गीत काठमाडौमा एक कार्यक्रमका बिच सार्वजनिक गरिएको हो । निर्देशक तथा गायक सुरज तामाङले निर्देशन गरेको म्युजिक भिडियो उत्कृष्ट बनेको छ । प्रेमिल जोडीको जिवनमा आउने जातिय अवरोधको सेरोफेरोलाई सुर...
इटहरी/ भर्खरै सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर फर्केका लोकप्रिय गायक राजु लामाको स्वरमा रहेको ‘ठूली’ सार्वजनिक भएको छ । राजु लामा र तारा शिरिष मगरको सुमधुर स्वरमा रहेको ठूलीको म्युजिक भिडियोलाई नेपाल इन्टरटेनमेन्ट प्रा. लि. ले सार्वजनिक गरेको हो । यस गीतमा शब्द कौडा बुढा मगरको रहेको छ । हेर्नुस् भिडियो । सङ्गित सरोज लामाको रहेको छ । त्यसैगरी यस भिडियोमा आकाश श्रेष्ठ र बिना राउतले गज्जबको अभिन...
११ वर्षअघि लोकप्रिय भएको ‘मेरो बोली सुन्दा’ गीतको फिमेल भर्सन सार्बजनिक
इटहरी/ ११ वर्ष अघि मेल भर्सनमा सार्वजनिक भएर दर्शक स्रोता माझ लोकप्रिय भैसकेको 'मेरो बोली सुन्दा' बोलको गीतको म्युजिक भिडियो फिमेल भर्सनमा सार्वजनिक भएको छ । युवा पुस्तामा सम्भावना बोकेकी गायिका सुजाता केसीको सुमधुर स्वर यस गीतमा सुन्न सकिन्छ । मुनाल शिशिर कोइरालाको शब्द रहेको यस गीतमा नरहरि प्रेमीको संगीत रहेको छ । गीतलाई उदय राज पौडेलले संगीत संयोजन गरेका हुन् । हेर्नुस भिडियो म्य...
‘समुन्द्र सबै सराव भए’ भन्दै प्रेमीका फकाउदै आर्यन सिग्देल
इटहरी/ लोकप्रिय गायक शिव परियारको सुमधुर स्वर रहेको नयाँ गजल गीत 'समुन्द्र सबै सराव भए’ सार्वजनिक भएको छ । विशिष्ट संगीतकार आलोकश्रीको संगीत रहेको गीतका शब्द हरि पौडेलले कोरेका हुन् । महाराज थापाको संगीत संयोजना रहेको गीत गुन्जन स्टुडियोमा रेकर्ड भएको हो । गीतको आकर्षक भिडियो समेत बनेको छ । हेर्नुस भिडियो जसमा अभिनेता आर्यन सिग्देल र श्री थपलियाको अभिनय देख्न सकिन्छ । निकै तामझामका ...
गरिमा र प्रिन्सको राधाकृष्ण अवतार
इटहरी/ लोकप्रिय गायक सुरेन चन्द र गायिका प्रतिमा केसीको स्वर रहेको राधा प्यारीको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । गायक सुरेनले पछिल्लो समय एकपछि अर्को सफल गीतमा स्वर दिइरहेका बेला प्रेम रोमान्सले भरिएको राधा प्यारीबाट निकै आशा गरेको बताएका छन् । गायक तथा संगीतकार सिएल शर्माको शब्द तथा संगीत सृजना रहेको राधा प्यारीमा एरेन्ज विश्व अधिकारीको रहेको छ । किशोर थापाको मिक्सिगं मास्टरिगं रहेको ग...
अञ्जनाले हेपेर बोलेको पुष्पलाई मन परेन
इटहरी/ अभिनेता पुष्प खड्का र मोडल अञ्जना बराईलीको अभिनयमा ‘नबोल हेपेर’बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतमा बिष्णु क्षेत्री र सरु गौतमले स्वर दिएका छन् । मिलन विष्टको शब्द, नविन रावलको संगीत रहेको गीतलाई मोहित मुनालले एरेन्ज गरेका हुन् । बिकाशा प्रोडक्सनले भिडियोको निर्माण गरेको हो । भिडियोमा पण्डितकी छोरी र मूर्तिकारबीचको प्रेमलाई प्रस्तुत गरेका छन् । हेर्नुस् भिडियो । ...
उत्कृष्ट गायक गायिका बने प्रताप दाश र एलिना चौहान
इटहरी/ काठमाडौंमा ‘स्टार म्युजिक भिडियो अवार्ड २०२२’ सम्पन्न भएको छ । विभिन्न उत्कृष्ट ४२ विधा तथा जुरी र पपुलर विधामा अवार्ड प्रदान गर्दै शनिबार यो अवार्ड सम्पन्न भएको हो । पूर्व खानेपानी मन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न सो अवार्ड समारोहमा आधुनिक गीत यसपटक प्रताप दाश र एलिना चौहान उत्कृष्ट गायक गायिका भएका छन् । प्रताप दासले तिमि छाउ र एलिना चौहानले ओखल ढिकीबाट उत्कृष्ट गायनको अवार्ड चुमेका ...
‘मायालु आभाष’मा पुजा शर्मा र आर्यन सिग्देलको सुहाएको जोडि
इटहरी/ म्यूजिक भिडियोमा अभिनेता आर्यन सिग्देल र अभिनेत्री पुजा शर्माको जोडी बाँधिएको छ । उनिहरु अभिनित गीत 'मायालु आभाष'को भिडियो रिलीज भएको छ । निर्देशक विधान कार्कीले यस भिडियोमा फिल्मी शैलिमा कथा भनेका छन् । दर्शकका ढुकढुकी सिग्देल र शर्माको जोडी सुहाएको प्रतिक्रिया भिडियो रिलीज भएपछि आईरहेका छन् । अष्ट्रेलिया र नेपालमा सक्रिय 'नेपमेलो'ले यो गीत तयार पारेको हो । रबि मल्लको शब्द तथा संगीत रहेक...
‘वेलकम टु हेम्जाकोट’ को गीत: ‘मायाको रेडियो’मा बिनोद र अलिशाको ठुम्का
कार्तिक २४ गतेलाई प्रदर्शन मिति तय गरिएको फिल्म ‘वेलकम टु हेम्जाकोट’ मा समाबेश ‘मायाको रेडियो’ बोलको गीत बुधबार राजधानीमा आयोजीत प्रेसमिटमा सार्वजनीक गरिएको छ । सरोज पौडेलको लेखन र निर्देशनमा बनेको फिल्मको आइटम फ्लेभरको गीतमा बिनोद न्यौपाने र अलिशा शर्मा फिचर छन् । कविराज गहतराजले कोरियोग्राफी गरेको गीतमा उदेश श्रेष्ठ र इन्दिरा जोशीको स्वर,राज सागरको संगीत र प्रज्वल अधिकारीको शब्द छ । कार्यक्रमम...